Laporta oo cadeeyay go’aanka Barcelona ee ku aadan iibinta De Jong & cusbooneysiinta qandaraaska Dembélé – Gool FM
(Barcelona) 18 Maajo 2022. Madaxweynaha Barcelona ee ​​Juan Laporta, ayaa shaaca ka qaaday go’aanka Barca ee iibinta Frenkie de Jong iyo cusbooneysiinta qandaraaska xiddiga reer France Ousmane Dembélé.
Qandaraaska Ousmane Dembélé ee Barcelona ayaa dhacaya xagaagan, sidaas darteed kooxda ayaa isku dayaysa inay heshiis la gaarto ciyaaryahanka iyo wakiiladiisa si ay qandaraaska ugu kordhiyaan muddo dheer.
Halka magaca xiddiga reer Holland De Jong lala xiriirinayo inuu ka tagayo Barcelona iyadoo Manchester United ay xiiseyneyso inay la saxiixato kaddib markii uu codsaday macalinkooda cusub ee Eric Ten Hag.
Haddaba wargeyska Marca ee dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Madaxweynaha Barcelona ee ​​Juan Laporta, wuxuuna yiri:
“Iibinta De Jong? Waxaa jira ciyaartoy Barcelona ah oo laga doonayo suuqa, waxaana samayn doonaa waxa u fiican Barcelona.”
“Haddii aan nadiifin karno dhaqaalaha kooxda, waxaan heli doonaa ciyaar wanaag iyo lacag, marka ma garanayo inaan iibineyno ciyaartoyda qaar iyo inkale,”
Dhinaca kale Juan Laporta ayaa ka hadlay dib u cusbooneysiinta qandaraaska Dembélé, wuxuuna yiri:
“Wuxuu doonayaa inuu sii joogo, laakiin sidoo kale wuxuu u furan yahay doorashooyin kale oo bixinaya shuruudo laga yaabo inay ka fiican yihiin dalabkeena.”
“Waxaan bixinay dalabkeena waqti dheer kahor, waxayna noo sheegeen in jawaabtu ay noqon doonto marka xilli ciyaareedka uu dhamaado, waxaan jeclaan lahaa inaan helo jawaab degdeg ah, laakiin kuma qasbi karno iyaga, wuxuu haystaa dadka qaarkood oo xakameynaya xaaladda, laakiin waxaan rajeynayaa inuu sii joogo.”